 Nꞌihi na Joel buru amụma sị, ‘Nꞌoge ikpeazụ, nke a bụ ihe na-aghaghị ime, dị ka Onyenwe anyị kwuru. Aga m awụkwasị mmadụ nile Mmụọ m. Nꞌoge ahụ ụmụ unu ndị ikom na ụmụ unu ndị inyom ga-ebu amụma. Ndị okorọbịa unu ga-ahụ ọhụ. Ndị okenye nꞌetiti unu ga-arọkwa nrọ. Ndị bụ ohu nꞌetiti unu, nwoke ha na nwanyị nꞌime ha, ka m ga-awụkwasị Mmụọ m. Ha ga-ebukwa amụma.
Ma Pita sịrị ha, “Chegharịanụ! Sitekwanụ na mmehie unu tụgharịa bịakwute Chineke! Ka e mee unu baptizim baa nꞌaha Jisọs, nꞌihi mgbaghara mmehie unu. Unu mee nke a, unu ga-anata onyinye a, bụ Mmụọ Nsọ.
 “Chegharịanụ ugbu a, lọghachikwutenụ Chineke! Ọ ga-ehichapụ mmehie unu. Onyenwe anyị ga-emekwa ka agbamume nke ime mmụọ rute unu aka. Ọ ga-ezitekwara unu Jisọs Onye nzọpụta ahụ unu na-ele anya ya. Onye nọ nꞌeluigwe ugbu a. Ebe ahụ ka ọ ga-anọgide tutuu e dozie ihe nile. Nꞌihi na otu a ka Chineke kwuru site nꞌọnụ ndị amụma ya na mgbe ochie.
“Nꞌụzọ dị otu a, ọṅụ na-adị nꞌeluigwe nꞌihi otu onye mmehie nke chegharịrị, karịa ndị ezi omume iri toolu na toolu ndị mkpa nzọpụta na-adịghị akpa.
Nke a bụ isi okwu ya, “Oge ahụ eruola. Oge Chineke ga-ebido ọchịchị ya nꞌụwa. Chegharịanụ, nabatakwaranụ onwe unu ozi ọma a!”
Mgbe ha kwupụtasịrị mmehie ha nile, o mere ha baptizim nꞌosimiri Jọdan.
 Mgbe ahụ Jisọs bidoro ịkọcha obodo nile ebe ọ rụrụ ọtụtụ ọrụ ebube, nꞌihi na obodo ndị a echegharịghị bịakwute Chineke. “Ahụhụ dịrị gị obodo Korazin, ahụhụ dịkwara gị obodo Betsaida, nꞌihi na a si na ọ bụ nꞌime obodo Taịa na Saịdọn ka m rụrụ ọrụ ebube nile m rụrụ nꞌime unu, ha gaara echegharị gosi nchegharị ha site nꞌiyi uwe nkịkara, na ikpokwasị onwe ha ntụ nꞌisi. Nꞌezie asị m unu na ọ ga-adịrị unu njọ nꞌụbọchị ikpe ahụ karịa obodo Taịa na Saịdọn. Ọ bụ ezie na gị Kapanọm bụ obodo a na-asọpụrụ, ma ị ga-arịdaru ọkụ ala mmụọ. Nꞌihi na a sị na m rụrụ ọrụ ebube m rụrụ nꞌime gị nꞌobodo Sodọm, agaraghị ala ya nꞌiyi. Ọ gaara adịrị ruo taa. Nꞌezie, ọ ga-adịrị gị njọ nꞌụbọchị ikpe ahụ karịa obodo Sodọm.”
Nꞌihi na oge ikpe ikpe eruola, ọ ga-amalịtekwa nꞌebe ndị Chineke nọ. Ọ̀ bụrụ na a ga-ebu ụzọ kpee anyị ikpe, gịnị ga-abụkwanụ ọnọdụ ndị ahụ na-ekwereghị na Kraịst?
Ya mere, e likọtara anyị na ya na baptizim ka anyị si otu a keta oke nꞌọnwụ ya. Ka anyị sikwa otu a keta oke na ndụ ọhụrụ, mgbe e sitere nꞌike dị ebube nke Nna mee ka Kraịst si nꞌọnwụ bilie.